हामी ब्याट्री चार्जिंगका लागि UGREEN बाट नयाँ विश्लेषण गर्दछौं ग्याजेट समाचार
हामी ब्याट्री चार्जको लागि UGREEN बाट नयाँ विश्लेषण गर्दछौं
हामी प्राप्त र परीक्षण जारी राख्दछौं ब्याट्री चार्जसँग सम्बन्धित ग्याजेटहरू हाम्रा उपकरणहरूको, धेरै महान बिर्सेका लागि। हामी देख्छौं कि कसरी स्मार्टफोनको प्रत्येक खण्डको निरन्तर विकासमा, ब्याट्रीहरू बर्ष-बर्ष बिर्सिन गएको देखिन्छ। आज को हातबाट UGREEN, हामी तपाईं ल्याउँछौं विकल्पहरू जुन हाम्रो स्मार्टफोनहरू सँधै "सक्रिय" हुन्छन्.
हामी सँधै युग्रेन जस्ता निर्माताहरूका लागि कृतज्ञ छौं जसले सुविधाहरू प्रदान गर्दछ ताकि हाम्रो उपकरणको ब्याट्री जहिले पनि सक्रिय रहन्छ। चार्जर्स प्रस्ताव गर्दै धेरै बढी कुशल र कम समयमा चार्ज गर्दछ। हे वास्तवमै साना र शक्तिशाली बाह्य ब्याट्रीहरू त्यो हाम्रो स्मार्टफोनको दैनिक उपयोगी जीवन धेरै पटक गुणा।
1 UGREEN, तपाईंको स्मार्टफोनको लागि विश्वासी साथी
2 हामीसँग जारी राख्न UGREEN उत्पादनहरू
3 18W USB C चार्जर
4 30W USB C चार्जर
5 उग्रिन PowerDot
UGREEN, तपाईंको स्मार्टफोनको लागि विश्वासी साथी
यस अवसरमा, हामी प्रमाणित गर्न सक्षम भएका छौं, यसको सबैभन्दा हालको उत्पादनहरू मध्ये तीन। दुई चार्जरहरू con अल्ट्रा द्रुत चार्ज गर्दै र थोरै तर "बदमाश" बाह्य ब्याट्री, जसको बारेमा हामी तपाईंलाई तल विस्तृत रूपमा बताउँछौं। निश्चित सामानहरू आफ्नो उपकरण भन्दा बाहिर ब्याट्री खपत गर्नेहरूका लागि आदर्श.
हामीसँग उप्रान्त हाम्रो स्मार्टफोन, ट्याब्लेट वा कम्प्युटरमा ब्याट्री सकृय गर्न बहाना छैन। एक छ हामी पहिले भन्दा छिटो चार्ज यो एक अग्रिम हो कि हामी यसलाई प्रयास गर्ने अवसर नभएसम्म त्यति कदर हुँदैन। र हामीलाई प्रस्ताव गर्न सक्षम एक सानो ग्याजेट वरिपरि ले लगभग कुनै पनि स्मार्टफोनको than भन्दा बढि पूर्ण चार्जहरू यो पनि सुपर रोचक छ।
हामीसँग जारी राख्न UGREEN उत्पादनहरू
हामीले तपाईलाई भनेको छै, तीन UGREEN सामानहरू, र साथै यस उत्पादकले बेच्ने धेरैको संख्या, ब्याट्री चार्ज गर्न सम्बन्धित छ। उत्पादनहरू जुन सुरूमा छन् धेरै उच्च गुणस्तर। र उनीहरूसँग पनि छ प्रयोगकर्ताहरू बीच राम्रो प्रतिष्ठा सब भन्दा मान्यता प्राप्त स्टोरहरू मार्फत।
उदाहरणका लागि, वा कुनै पनि घर वा अफिसमा हेर्नका लागि अमेजनले सिफारिश गरेका व्यक्तिहरू बीच यो UGREEN सहयोगी पार गर्न वास्तवमै सजिलो छ। त्यसकारण, हामीसँग छ भनेर जानेर मान्यता प्राप्त प्रतिष्ठा को उत्पादनहरु तपाईंको समाचार अझ रमाईलो बनाउँछ। र त्यो हालको पदोन्नती र छुट कोडहरूको लागि धन्यवाद तपाइँ तिनीहरूलाई अझ राम्रो मूल्यमा तपाइँको बनाउन सक्नुहुन्छ।
चार्जरहरू त्यस्तो चीज हुन् जुन हामी विरलै लगानी गर्छौं यदि आवश्यक बाहिर छैन भने। कारखाना चार्जरमा गणना गर्दै, जुन हालसम्म सबै निर्माताहरू समावेश छन्, हामी अर्को किन्ने कुनै कारण देख्दैनौं। जबसम्म अवस्थाका कारण हामीलाई दोस्रो चार्जर चाहिन्छ, वा हामीसँग भएको हराएको वा बिग्रिएको छ। तर सत्य यो छ कि द्रुत चार्जिंग एक महत्त्वपूर्ण अग्रिम हो।
18W USB C चार्जर
उत्पादनहरु को बारे मा पहिलो हो पावर डेलिभरी technology.० टेक्नोलोजीको साथ एक अल्ट्रा फास्ट चार्ज चार्जर। यो छ 18W द्रुत चार्ज त्यो एक बोझ को प्रतिज्ञा गर्छ Any० मिनेटमा लगभग कुनै पनि स्मार्टफोनको battery०% ब्याट्री। एक संग एक लोड क्लासिक चार्जर भन्दा %०% द्रुत गति परम्परागत
यस अवस्थामा, हामीसँग चार्जरको सामना गरिरहेका छौं USB प्रकार-सी चार्ज इनपुट। हामी युएसबी अन्त्य भएको परम्परागत केबल प्रयोग गर्न सक्दैनौं। यसले केवल यूएसबी सी बाट यूएसबी सी, वा यूएसबी सी टु लाइटनिंगको साथ केवल कार्य गर्दछ। यस अवस्थामा, सम्भावनाहरू आंशिक रूपमा सीमित छन्, तर यो पनि साँचो हो धेरै जसो हालका उपकरणहरूले यस प्रकारका कनेक्टर्सको लागि निश्चित रूपमा छनौट गरिसकेका छन्.
गणना गर्नुहोस् एक UGREEN चार्जर सुरक्षाको पर्यायवाची हो। यो संग एक प्रणाली छ जब यो पत्ता लगाउँछ कि उपकरण पूर्ण चार्ज गरिएको छ यो स्वचालित रूपमा विच्छेदन हुन्छ। यो संग अधिभार संरक्षण र अत्यधिक तताउने। यो पनि सुसज्जित छ चिप आईसी के प्रणाली बनाउँछ इष्टतम चार्जिंग तापमान प्राप्त गर्न गतिलाई ताप कम गर्नुहोस्.
शारीरिक रूपमा एक चार्जरसँग अधिक या कम मोटा, वा यसको टर्मिनेसनको र beyond्ग भन्दा बाहिरको विज्ञान हुँदैन। यस अवस्थामा हामी सामना गरिरहेका छौं सबैभन्दा "सामान्य" को चार्जर तिनीहरूको उपस्थिति को बारे मा, तिनीहरू एक चमकदार सेतो फिनिश छ।
अब तपाईंको किन्नुहोस् 18W USB C चार्जर अमेजन मा छुट
30W USB C चार्जर
उत्पादनहरु को दोस्रो अर्को चार्जर हो। शारीरिक रूपमा पहिलेको भन्दा धेरै समान, केवल थोरै मोटा। तर यो भन्दा धेरै शक्तिशाली छ अल्ट्रा द्रुत चार्जिंग, पावर डेलिभरी 3.0.०, तर संग 30W उर्जा। तपाईं दुई घण्टा भन्दा कममा आउँदो पुस्ता आईप्याड पूर्ण रूपमा चार्ज गर्न सक्नुहुनेछ।
साथै यो W०W चार्जर पनि छ USB सी इनपुट र आउटपुट कनेक्टर। त्यसो भए हामीलाई यस प्रकारको इनपुटको साथ केबल चाहिन्छ। जस्तो कि हामीले टिप्पणी गरेका छौं, यो अझै सम्म सबैभन्दा अधिक प्रयोग भएको छैन किनभने बजारमा माइक्रो यूएसबी बर्ष रहेको स .्ख्या हो। तर धेरै चाँडै यो सब भन्दा बढि सार्वभौमिक कनेक्टर हुनेछ.
सबै UGREEN चार्जरहरू जस्तै, यो आईसी चिपबाट पनि सुसज्जित छ ताकि यसले अत्यधिक तताउने समस्या भोग्दैन। हामी कुनै पनि उपकरण रातभरि जडान भएकोमा चिन्ता लिने छैन किनकि जब यसले पूर्ण चार्ज पत्ता लगाउँछ यो स्वचालित रूपमा रोकिन्छ।
अमेजनमा किन्नुहोस् तपाईंको 30W USB C चार्जर छुट प्रमोशनको साथ
र हामी युग्रेन उत्पादनहरूको तेस्रोसँग जाँदैछौं जुन हामी प्राप्त गर्न र प्रयास गर्न भाग्यशाली छौं। A पोर्टेबल ब्याट्री यो लामो समयदेखि उपयोगीको रूपमा सहयोगी भएको छ। केवल जब हामी यात्रामा जान्छौं वा प्रकृतिमा सप्ताहन्तको लागि बाहिर जान्छौं। दिईयो बढ्दो कम्प्याक्ट आकार यस प्रकारका सामानहरूको, र उनीहरू कत्तिको महत्त्वपूर्ण हुन सक्छन्, दैनिक आधारमा तिनीहरूलाई लगाउने पागल होईन।
UGREEN पोर्टेबल ब्याट्री हाम्रो इलेक्ट्रोनिक उपकरणहरूको लागि आदर्श साथी हो। हाम्रो पोर्टेबल उपकरणहरूको लागि पोर्टेबल ग्याजेट। हामी संग छ १०,००० mAh सम्मको अतिरिक्त चार्ज उपलब्ध छ हाम्रो स्मार्टफोन, ट्याब्लेट वा ल्यापटप चार्ज गर्न। द्रुत चार्जको साथ USB conn.० कनेक्टर एक घण्टामा स्मार्टफोनलाई पूर्ण चार्ज दिन।
एक अल्ट्रा कम्प्याक्ट ग्याजेटमा ठूलो ब्याट्री चार्ज उपलब्ध छ। नेलहरू अन १०. x x .10.5. x x २.5.5 सेन्टीमिटर मापन गर्दछ, एक टेलिफोन भन्दा धेरै सानो। र एक संग पेसो को पनि सुपर प्रकाश १181१ ग्रामs.
हामी भेट्छौं दुई आउटपुट पोर्टहरू, एक परम्परागत यूएसबी र USB टाइप-सी, पछिल्लो पनि एक इनपुट पोर्ट ब्याट्री चार्ज गर्न। UGREEN PowerDot कुनै पनि उपकरणको लागी यसको लागि छिटो चार्जिंग प्रदान गर्दछ 18W उर्जा। कि हामी पनि USB सी मार्फत पूर्ण रूपमा चार्ज गर्न सक्छौं।
साइड बटनको साथ हामी उपलब्ध लोड क्षमता जान्न सक्छौं हामीसँग के छ चार साना एलईडी बत्तीहरूको लागि धन्यवाद, कुन बटनमा थिच्ने बेलामा सक्रिय पारेर हामी कति ब्याट्री छोड्छौं थाहा पाउनेछौं। १ एलईडी,%% र २%% बीचमा, २ एलईडीहरू, २ 1% र %०% बीचमा, LED एलईडीहरू, and१ र% 6% बीचमा र LED एलईडी, 25 2% र १००% बीचमा।
यदि तपाईं सानो र शक्तिशाली बाह्य ब्याट्री खोज्दै हुनुहुन्छ भने, कुनै उत्पादनहरू फेला परेनन्। UGREEN द्वारा। र एक विशेष छुट प्राप्त गर्न प्रोमोशनल कोड "NYWKL2EH" प्रयोग गर्न नबिर्सनुहोस्।
लेखको पूर्ण मार्ग: ग्याजेट समाचार » सामान्य » समीक्षा » हामी ब्याट्री चार्जको लागि UGREEN बाट नयाँ विश्लेषण गर्दछौं